8 လူပုဂ္ဂိုလ်များအပိုကြီးမားမိသားစုတပ် ချ. တဲထုတ်လုပ်သူ - တရုတ်နိုင်ငံ 8 တဲထုတ်လုပ်သူပေးသွင်းတပ် ချ. ပုဂ္ဂိုလ်များအပိုကြီးမားမိသားစု,စက်ရုံ -Fujie ပြင်ပတွင်
နေအိမ် » ထုတ်ကုန်များ » စခန်းချ » ရွက်ဖျင်တဲ
8 လူပုဂ္ဂိုလ်များအပိုကြီးမားမိသားစုတပ် ချ. တဲထုတ်လုပ်သူ
တံခါးန်းကျင်ပြားနိုင်ဝှမ်း groundsheet.2ကုလားကာနှင့်အတူကြီးမားတဲ့ပလပ်စတစ်ပြတင်းပေါက်.2ခြင်ထောင်နှင့်အတူတံခါးများ. အဆိုပါအိပ်ခန်း၏အပြင်ဘက်တွင်အပေါ်အိတ်ကပ်. ပြတင်းပေါက်အထက်တွင်အဝတ်.
လေဝင်လေထွက် AND ငွေ့ရည်ဖွဲ့တားဆီး
လေဝင်လေထွက်ခွင့်ပြုပါနှင့်ငွေ့ရည်ဖွဲ့လျှော့ချဖို့အသက်ရှင်သောဧရိယာတဝိုက်စီတန်း flysheet. တစ်ခုချင်းစီကိုအခန်းတစ်ခန်းနောက်ကွယ်မှတစ်ဦးကပိတ်ဆို့.
အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရွက်ဖျင်တဲများကဲ့သို့ပင်, အထူးစောင့်ရှောက်သည့်ရေစိုခံတာခံရပြီ, ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများအတွက်အတည်ပြုလိုက်ပါပြီရာ (တစျခုလုံးမှာတဲအောက်တွင်စမ်းသပ်ပြီး 200 ရေ / နာရီ / စတုရမ်းမီတာ၏လီတာ!) နှင့်ကွင်းဆင်းစမ်းသပ်မှုအပေါ်. -- Polyurethane-coated polyester flysheet -- thermobonded တိပ်သုံးပြီးတံဆိပ်ခတ်ချုပ်ရိုး -- 140 g / စတုရမ်းမီတာ polyethylene groundsheet.
ကျနော်တို့ကိုလေတဲအသီးအသီးအခြမ်းဖော်ထုတ်နေတဲ့လေတိုက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းများနှင့်တစ်ဦးအလှည့်ပန်းကန်ပေါ်မှာငါတို့ရွက်ဖျင်တဲအပေါငျးတို့သစမ်းသပ်ရန်. တဲတော်ပတ်ပတ်လည်အနေအထားအပေါင်းတို့၌ကျန်ရှိနေနှင့်အတူတစ်ဦးကစနစ်တကျစုဝေးတဲကိုထေိုငျဆက်လက်တည်ရှိသင့်တယ်;လေတိုက်နှုန်းအောက်မှာအီးတိုင်းတာခြင်း 50 မြေပြင်အဆင့်မှာ km / h.
ရိုးရာ: ဖိအားလျှောက်ထားနေချိန်မှာထိုထမ်းဘိုးကိုလည်း flysheet အောက်မှာသတ္တုတံသင်အတွက်ထားသည်နှင့်နေရာထဲသို့သွင်းထားရပါမည်.
Excellent ကလိမ်ခုခံ (6 မီလီမီတာသံမဏိ).
အာမခံခြင်းနှင့် Sales Service ပြီးနောက်
2-သာမန်အသုံးပြုမှုနှင့်အတူတစ်နှစ်အာမခံချက် -- ကျနော်တို့အာမခံချက်အောက်မှာမဆိုတက်ရင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဘို့သင့်မှာတဲနဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုအစားထိုးဘို့ပြီးနောက်-ရောင်းအားန်ဆောင်မှုများကိုသို့မဟုတ်အသုံးပြုမှုအားဖြင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးဖြစ်သော (အရာများအတွက်ဖောက်သည်ကုန်ကျစရိတ်သမုတ်သော): စာရွက်ပျံသန်း, အိပ်ခန်း, ထမ်းဘိုး, သို့မဟုတ်အဖုံး.
အဆိုပါ flysheet ထည် filter များထွက်၏ SPF နှင့်အတူခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် 30. ကျေးဇူးပြုပြီးမှတ်သားထားပါ: ခရမ်းလွန်၏ကြီးမားသောငွေပမာဏတစ်ခုတည်းဖွင့်လှစ်တံခါးကိုမှတဆင့်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်.
70*27*27စင်တီမီတာ 1 pc / စက္ဏူထူ
အလွန်ကြီးမားပြီးတောက်ပဆဋ္ဌဂံလူနေမှုဧရိယာ 11.7 မီတာ².4အိပ်ခန်း, 140 x က 210 စင်တီမီတာ.
ချုံ့ကြိုးနှင့်အတူအဖုံးဖုံး 23.9 ကီလိုဂရမ်. ရှုထောင့် 38 x 38 x က 58 စင်တီမီတာ